Enrique Iglesias - ဝီကီပီးဒီးယား
Enrique Miguel Iglesias Preysler (၁၉၇၅ မေ ၈ ရက် မွေးဖွား)သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအားဖြင့် Enrique Iglesias ဟု သိကြပြီး အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆာင်နှင့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သူသည် King of Latin Pop ဟု လေးစားခြင်းခံရသည်။ Iglesias သည် အသက်မွေးကျောင်းကို ၁၉၉၀အလယ်တွင် အမေရိကန် စပိန်ဘာသာ မှတ်တမ်းတံဆိပ် enrique Martimez အမည်အောက်မှ ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ လက်တင်အမေရိကတွင်နှင့် အမေရိကန်မှ Hispanic ဈေးကွက် အကြီးမားဆုံးကြယ်ပွင့်များထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထောင်စုနှစ်အပြောင်းအလဲတွင် သူသည် mainstream ဈေးကွက်ထဲတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ Universal Music Latino နှင့် ၆၈သန်းအတွက် Universal Music Group အတွက် muti-album အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏စပိန်album များနှင့် Interscope Records အင်္ဂလိပ် album များဖြန့်ချိရန်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ တွင် Interscope Records နှင့် ခွဲခွာခဲ့ပြီး အခြားနိုင်ငံတကာဂီတအုပ်စုဖြစ်သည့် Republic Recordsနှင့် bilingual album များဖြန့်ချိရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅တွင် Iglesias သည် ပြန်လည်ခွဲခွာခဲ့ပြီး Sony Music နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ လာမည့် album များကို စပိန်ရှိ Sony Music Latin နှင့် အင်္ဂလန်ရှိ RCA Records တို့နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့သည်။
၁ အစောပိုင်းဘဝနေထိုင်မှုနှင့် မိသားစု
၂ သီချင်းရေးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သရုပ်ဆောင်ခြင်း
၄ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကြောင်းအရင်း
Iglesias သည် သူ၏အစီအစဉ်(ဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း) ဖခင်ကို မသိစေချင်ခဲ့ပေ။ သူ၏မျိုးရိုးနာမည်ကို သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွင် မလိုချင်ခဲ့ပေ။ သူ၏မိသားစု nannay ထံမှ ငွေများချေးယူခဲ့ပြီး demo ကက်ဆက်တိတ်ခွေဖြင့် စပိန်သီချင်းတစ်ပုဒ်နှင့် အင်္ဂလိပ်သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ စတိတ်နာမည် Enrique Martinez အမည်မသိအဆိုရှင်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ Iglesias သည် Fonovisa Record တွင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ကောလိပ်ကျပြီးနောက် သူ၏ပထမ album ကို မှတ်တမ်းတင်ရန် Toronton သို့ ခရီးထွက်ခဲ့သည်။
သီချင်းရေးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သရုပ်ဆောင်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
Iglesias သည် သီချင်းရေးဆရာ Gay Chamber နှင့် ပူးပေါင်း၍ Un Naovo Giorno ကို ရေးသားခဲ့သည်။ (Andrea Bocelli ၏ ပထမဆုံး pop album မှဦးဆောင်သီချင်း) ထိုသီချင်းကို နောက်ပိုင်းတွင် First Day of My Life ဟု အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ခဲ့သည်။ Spice Girl Melanie C ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းသည် ဥရောပဖြတ်သန်း၍ ကြီးမားလာခဲ့သည်။ များပြားစွာသော နိုင်ငံများသို့ နံပါတ်တစ်နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Iglesias American Idol မှ Clay Aiken အတွင်း The Way သီချင်းကို ပူးပေါင်းရေးခဲ့သည်။ UK တီးဝိုင်း The Hollies ၏ album တွင် သီချင်းလေးပုဒ်ကို Iglesias နှင့်ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ idol Allstars:2010 (ဆွီဒင် idol စီးရီးမှ) All I Need is You သီချင်းကိုIglesias နှင့် Andreas Carlson၊ Kelle Engstram နှင့် Kritstan Ludin နှင့် အတူပူးပေါင်းရေးခဲ့သည်။ သူသည် Jennifer Lopez ၏သီချင်း Dance Again ကို ၂၀၁၂ တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Billboard Hot Dance Club songs တွင် နံပါတ်တစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် Iglesias သည် off Broadway ကို ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ show ပွဲကို ဆုံးဖြတ်ကျင်းပခဲ့သည်။ show တွင် များစွာသော ကိုးကားမှုများပါဝင်ပြီး classic ၊ လက်တင်နှင့် pop သီချင်းများပါဝင်သည်။
၂၀၁၀တွင် Iglesias သည် Music for Relief နှင့် အမေရိကန်တီးဝိုင်းLinkin Park ၏ Download to Donate တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် Download to Donate for Haiti album ၊ ၂၀၁၀ Haiti earthquake album ကို အဆိုတော် Mike Shinoda နှင့် ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ များပြားစွာသော နေရာများတွင် album ကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ တွင် Iglesias သည် သူနောက်လို်က်များကို ဖိလစ်ပိုင်မှ Typhoon Haiyan မှ ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန် အမေရိကန် ကြက်ခြေနီအသင်းသို့ ငွေများပေးလှုခဲ့သည်။ Typhoon မုန်းတိုင်းတွင် ငလျင်လုပ်ပြီးနောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ Iglesias သည် Hope City Habitat for Humanity, Help for Heroes, Live Earth Muscular Dystrpohy Association၊ Music for Relief၊ Special Olympics တို့ကို ထောက်ပံခဲ့သည်။
↑ Enrique Iglesias Nickname King of Latin Pop။ Biography။5September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Enrique Iglesias Named Latino King of Pop။ Latin Gossip (16 June 2010)။ 19 June 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Enrique Iglesias signs with Sony Music။ Billboard (24 July 2015)။ 24 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jado၊ Monjed။ Play 99.6 and iJordan Announce : Global Star Enrique Iglesias Will Perform in Amman။ 8 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Enrique Iglesias Extends Record For Most Latin Airplay No. 1s။ Billboard (19 November 2012)။ 19 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Steve Aoki, Iggy Azalea, Enrique Iglesias Net New Dance/Electronic No. 1s။ Billboard (10 October 2014)။6August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grandnephew Definition။ Dictionary.com။ 1 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 10 cosas (+2) que nadie te vaacontar de Isabel Preysler။ Lecturas။
↑ Enrique Iglesias။ 1 October 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bocelli Pops With 'Andrea'။ Billboard (16 August 2004)။ 16 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vena၊ Jocelyn (24 July 2012)။ Jennifer Lopez Reflects On Marc Anthony Split On ‘Dance Again’။ MTV။ 16 February 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Susman၊ Gary။ "Iglesias: 'Enrique Iglesias removes trademark mole. Doctors said it might lead to cancer."၊ Entertainment Weekly၊ 20 August 2003။ 21 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 27 August 2014။
↑ ericraymitchellhl (9 October 2013)။ Anna Kournikova & Enrique Iglesias Split After 12 Years Together — Report။ Hollywood Life။ 11 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Enrique Iglesias and Anna Kournikova put breakup rumours to rest as they go boating together in Miami Beach | Mail Online။ Dailymail.co.uk (13 January 2014)။ 11 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Iglesias&oldid=702158" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။